Hoogganoonni Yunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa, har’a qofa qofatti, walga’ii hoogganoota daldalaa Ashiyaa irratti haasawa dhageessisaniin, waa’ee deemsa daldalaa naannoo sanaa irratti ilaalcha wal-faallessu calaqqisanii jiran.
Prezidaantiin Yunaayitid Isteets – Donaald Traamp, walga’ii hoogganoota APEC irratti haasawa dhageessisaniin, biyya naannoo Indiyaa-paasifik keessa jirtu kama wajjiin iyyuu walii-galtee daldalaa mallatteessuuf fedhii qabaachuu isaanii dubbatanii, garu walii-galtee biyyoota hedduu hirmaachisu kan akka walii-galtee biyyoota 12 hirmaachisee fi “Trans Pacific Partnership” kan hin simanne ta’uu jabeessanii hubachiisan. Walii-galtee kana bara mootummaa Obaamaa mallatteessame kana, akkuma taayitaa qabatanitti diigan – Traamp.
Akkuma Traamp waltajjii irraa bu’anitti kan itti-aananii haasawa godhan – Prezidaantiin Chaayinaa Shii Jiin Piing ammoo, yaada walii-galtee biyyoota hirmaachisee jabeessanii deggeruudhaan dubbatan. Keessumaa, naannoo gabaa walabaa, kan walii-galteelee daldalaa biyyoota gidduuttii fi naannoo Ashiyaa Paasifik keessatti babal’isu, ka akka FTAAP jabeessuun barbaachisaa tahuu hubachiisan.
Imaltoonni Amerikaa Seenuuf Guyyaa Tokko Dura Ilaalamuu Qabu